Iantsoana fanampiana ireo zaza kamban- telo | NewsMada
Iantsoana fanampiana ireo zaza kamban- telo
Par Webmaster Two sur 13/02/2018
Teraka ny alin’ny 5 febroary teo, tao amin’ny Hopitalibe Toamasina, i Baofotoa Nafissa, renim-pianakaviana 33 taona. Efa manan-janaka mianadahy, 10 taona sy efa-taona, izy. Zaza fanintelony naterany ireto kambana telo mianandahy ireto, i Beanjara Dorlis sy I Beanjara Donatien, izay samy lahy ary samy milanja iray kilao mahery kely avy. Salama tsara avokoa izy telo mianadahy.
Nambaran’ny mpitsabo kosa fa noho ny mbola tsy fahampian’ny lanja no tsy ahafahana mandefa azy ireo mody. Nandritra ny fakana sary sy fanadihadina natao tao amin’ny Hopitalibe nilaza ny ray aman-drenin’ izy telo mianadahy fa dimy izao ny zanak’ izy ireo.
Fahasovana izany, saingy mangataka amin’ny tsara sitrapo izy mivady ho an ‘izay afaka manao tolo-tanana fa sahirana amin’ny fivelomana izy ireo. Monina ao amin’ny fokontany Tanambao Varreri parisela 21/73 lot 452 izy ireo.